Tijaabooyinka qaar ee processor-ka M1X ee dahsoon ayaa muuqda | Waxaan ka socdaa mac
Nooca cusub ee processor-ka loo yaqaan 'Macs M1 processor' waa kii ugu horreeyay ee waayi cusub ee qalabka 'ARM' loo isticmaalo kombiyuutarada Apple. Taasi waxay ka dhigan tahay in milkiilaha hadda ee cusub Silicon Apple waxaad awoodi doontaa inaad muujiso inaad haysato processor-kii ugu fiicnaa taariikhda waqti dheer. Sida Chips-ka iphone, sanad walba way ka fiicnaadaan.
Markaa layaab malahan in dhowr bilood un kadib markii la siidaayay Mac-yada ugu horeeya ee M1 ku shaqeeya, waxaa durba jira warar xan ah oo ku saabsan badalkiisa Tijaabooyinka qaarkood ayaa ka soo muuqday Daanyeerka CPU tuhmane M1X. Isbeddel ku yimid Apple's M1, oo leh GPU ka awood badan. Aan aragno.
Tixraaca processor-ka cusub ayaa hadda ka soo muuqday liiska jajabyada ku qoran bogga internetka ee loogu talagalay isbarbar dhiga waxqabadka processor-ka Daanyeerka CPU. Magaceedu wuxuu ku muujinayaa dhammaantood: M1X.
Sida ku cad bogga, 'M1X' chip waa Apple Silicon CPU laga bilaabo Qalabka 12. Haddii la barbar dhigo M1-da asalka ah, jabkan cusub wuxuu leeyahay 12 koronto halkii uu ka ahaan lahaa siddeed processor-ka hadda jira. GP-gaaga gudaha ayaa leh Qalabka 16, halkii laga heli lahaa GP-ga 8-geesoodka ah ee imika M1.
Tilmaamahan ayaa ka soo muuqday websaydhka la sheegay inay aad ula jaan qaadayaan waxa Apple bilaabi karto dhawr bilood gudahood. "M1X", marka loo eego CPU Daanyeer, wuxuu sii ahaan doonaa processor 3,2 GHz ku saleysan habka wax soo saarka nanometer 5.
M1 leh awood muuqaallo fiican leh
Haddii xogtu dhab tahay, waxay umuuqataa in cusbooneysiinta M1 hadda ay diirada saari doonto kordhinta awooda muuqaalkeeda. Liistadu waxay soo jeedinaysaa in "M1X" uu yeelan karo 16-core GPU ah oo leh 16GB xasuusta ugu badan. Waxay lahaan kartaa 256 cutub oo dil ah, halkii ay ka ahaan lahayd 128-da M1, waana suuragal inay noqoto xakamee saddex shaashad halkii labada aad hada maamuli lahayd.
Sida laga soo xigtay CPU Daanyeer, "M1X" ayaa ka soo muuqan doona rubuc labaad ee 2021 iyadoo la casriyeeyay 14-inch MacBook Pro, 16-inch MacBook Pro, iyo 27-inch iMac. Marka loo barbardhigo culeyska hadda jira, 'M1X' sidoo kale waxaa lagu xantaa inuu leeyahay awood koronto oo sarreysa oo leh 35W TDP halkii laga isticmaali lahaa 1W M15.
maskaxda ku hay in qeexitaannadan ay yihiin aan macquul aheyn in la xaqiijiyo sida dhab ah waqtigan. Iyo Daanyeerka CPU uma muuqdo inuu helayo kalsooni badan oo ka mid ah goobaha qalabka wax lagu qiimeeyo. Laakiin ugu yaraan cusbooneysiinta la sheegay waxay umuuqataa macquul iyo macquul. Waan arki doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Tijaabooyinka processor-ka M1X ee dahsoon ayaa muuqda